Na-egosi izipu site na Eprel, 2020
Ihe oyiyi nke St. George the Drake
Ntube nkume George George bụ site na 1806, ma eleghị anya site Jan Chládek Jr.
Na 1884, František Jiroš na nwunye ya bụ Petronila nwere nrọ ọhụrụ nke Joseph Zeman nke Tatobit mere. A na-eji akụkụ nke ọ bụla na-atụgharị ụkwụ n'akụkụ nke ọ bụla: Kraịst n'ime Ogige Gethsemeni, abụọ nke ndị nsọ Petronila na Fellicula, Mary Magdalene na Saint Anna.
Otu oji Jiří Novák gosipụtara ugbu a. Ihe oyiyi mbụ dị na vestibule nke Museum nke Bohemian Paradise na Turnov.
Nkume osiso n’elu ugbo Kopic
N'ime okwute dị n'okpuru ugbo Kopic, Jirošová rychta, onye nwe mgbe ahụ na onye na-ese ihe ọdịnala Vojtěch Kopic mepụtara gallery nke enweghị nsogbu, ọkachasị sitere na akụkọ Czech. Ọrụ ya dịgidere ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ afọ 40 (1940 ruo 1978) ma n'oge ahụ, e mepụtara ihe karịrị 30 nke ọnụ ọgụgụ, anụmanụ ma ọ bụ ihu nke ụlọ, na-agbakwunye site na nrutu ma ọ bụ ozi.
Vojtěch Kopic (1909-1978) lụrụ ụlọ ahụ na 1932. Site na mgbidi ruo mgbe ọ nwụrụ na ndagwurugwu n'okpuru ugbo ahụ ọ tụpụtara ọtụtụ ihe enyemaka na nkume okwute ahụ, isiokwu ndị o mepụtara kachasị site na akụkọ akụkọ Czech. A mara ọkwa ncheta ọrụ ndị a site na arụmọrụ site na 25 nke November 2017 n'ụdị mpaghara nchebe maka ncheta ọdịbendị ọdịnala Kopicův statek.
Markedzọ akara ga - eduga gị na njem ahụ, ntụgharị ga-ama akara ntụgharị njem nleta.
Kopicův statek (nke a na-akpọbu Jirošova rychta) bụ ntọala oge echere site na njedebe nke narị afọ nke 18, bụ ihe ncheta ọdịbendị. Nke a bụ (ya na, ọmụmaatụ, ugbo Dlask) bụ otu n'ime ihe atụ kachasị dị ụtọ banyere nhazi nke ndị mmadụ nke ụdị Pojizerký. Ugbo (Kacan…
Violik ma ọ bụ Elbe Shield (Polish Łabski Szczyt, Veilchensteine ​​German ma ọ bụ Veilchenspitze), bụ ugwu dị na Silesian Ridge dị na Ugwu Giant, na ókèala Czech Republic na Poland. Ọ bụ ọnụ ọnụ ugwu na-agbago elu ya na ọnụ ọnụ ugwu. Ugwu dị na 1 km north of Labská bouda, 5,5 km north of Dolní Mísečky and 6 km from Polish Piechowice.
N'elu mkpọda nke violik nwere osimiri na mmiri. Isi ihe dị na egwuregwu egwuregwu ahụ, bụ mkpara na-atụgharị ahụ, na ọnọdụ dị ala mgbe ahụ wee bulie ikpere. N'ebe ndịda ọdịda anyanwụ, ihe na-erughị otu kilomita site na nzuko a, Elbe Meadow, bụ ebe isi iyi Elbe.
You nwere ike iru nchikota a na-acha ọbara ọbara akara nke akara Czech-Polish. Ọ na-agafe n’elu nkume dị elu site na ndịda akụkụ ebe dị anya site na mita 40. Nkume ahụ n'onwe ya dị na mpaghara 1 nke Giant Mountains National Park, yabụ na ndị njem na-agaghị anabata ya. Site na elu ugwu ahụ, enwere ezigbo echiche banyere Ugwu Giant, ugwu Jizera na Jeleniogórska Basin.
Aka Rokytnice nad Jizerou, Oke ugwu
Ručičky bụ ụzọ mbata na Rokytnice nad Jizerou, ihe dịka 300 m site na ọdụ ikpeazụ nke ụgbọ USB Horní Domky. Site ebe ahụ, okporo ụzọ ahụ ga-akpọga gị, ọmụmaatụ, na Vosecká bouda, Rýžoviště na Harrachov, na Studenov, ruo Dvoračky na gaba na Elbe opupu. Zọ ndị njem na-agba ebe a n'ụzọ ise, yabụ aha Ručičky - ụzọ ise dịka mkpịsị aka ise. Čzọ ụzọ Ručičky dị nso Rokytnice nad Jizerou, naanị narị ole na ole site na ọdụ ụgbọ elu nke ọdụ ụgbọ mmiri gaa Horní Domky. Akụkụ kachasị na ụzọ a na-agafe agafe bụ ihe osise mara mma nke Krakonoš, onye na-elekọta ugwu ya ebe a.
Bohumil Hanč (November 19, 1886 na Benecko - Machị 24, 1913 Labská bouda na Giant Mountains) bụ onye egwuregwu egwuregwu Czech, skeeti na asọmpi obodo. Ọ nwụrụ n'ụzọ obi ọjọọ n'oge agbụrụ mba ụwa na-asọmpi na-efegharị kilomita 50 na ugwu nke Giant Mountain ya na enyi ya Václav Vrbata na Ista na 1913, mgbe ihu igwe bịara ka njọ na mberede.
1907-1913 Na February 24, 1907, o meriri utu aha ya nke ndị Czech Crown Cross-Country Championship na 50 km. Ọ bụ naanị n'afọ nke abụọ nke asọmpi ịgba ọsọ. Nke abụọ bụ Emerich Rath na nke atọ Josef Mejvald. Site na mgbe ahụ gaa n'ihu, ọ nwere ike ịnụ ụtọ aha Master Skier. Hanč meriri n'egwuregwu ịgba ọsọ na afọ ndị sochiri 1908 na 1909. Mgbe ahụ ọ ga-aga agha - ọ rụrụ ọrụ dị ka onye isi na Sarajevo. Onye ya na ya na-alụ ọgụ Václav Vrbata, onye ya na ya maara kemgbe Sokol, sokwa ya jee ozi, n’oge agha ya, ha ghọrọ ezigbo ndị enyi. Mgbe agha ahụ bisịrị, ọ lụrụ nwanyị na ya na nwunye ya Slávka na-achọ nwa nwoke, Bohumil.
Ọsọ ndị agbụrụ na March 24, 1913, afọ nke asatọ nke ozi-iri ise-ise ahụ mere…
Eliška Stachelberg Tower Tower
Na Trutnov-Babí, na Stachelberg, na nso mgbidi ọgụ, enwere ụlọ elu elepụ anya Eliška. Site na ikpo okwu ị na-elele ị ga-ahụ ọ bụghị naanị ugwu Orlické na Jestřebí, Rýchory ma ọ bụ ndagwurugwu alsopa, kamakwa mgbidi nchebe nke First Republic.
Aha ụlọ nche a na-eche nche sitere na Queen Eliška, nwunye nke King Wenceslas nke Abụọ, onye obodo ya gụnyere Trutnov dị nso. N'ihi ebe ụlọ nche dị na mpaghara Stachelberg artillery, o nwere ike ichetara gị ụfọdụ ndị ọrụ nche. Eliška guzoro n'ebe dị elu nke 632 m, dị 24,5 dị elu ma mejupụtara ihe eji osisi rụọ nke nwere ihe nchara, nke na-efegharị na steepụ ọla nchara na-eduga n'echiche abụọ. Nke mbu na-echere gị n'ihe na-erughị mita iri, nke abụọ dị na elu 20,5 m. E kpuchie ikpo okwu ahụ, yabụ ị nwere ike ịnụ ụtọ panorama na ihu igwe ọ bụla.
Ulo elu a na-ahụ anya dị mita 24,5, ebe ndị a na-elele anya dị na elu 9,4 na 20,8 mita n'elu ala. Site na ụlọ nche na-ele anya ị ga-ahụ Libavské sedlo (Brana Lubawska) - nnukwu
Haze nad Jizerou, Rybnice
Angelka Evangelical Křížlice
Ihe odide kacha ochie e dere banyere obodo Křížlice bụ na 1492. Ka anyị si ebe ndị ọzọ, anyị na-amụta na Křížlice abanyelarị na 1358 nwee obere ụlọ ụka. Na narị afọ nke iri na ise, ụlọ ụka ifo dị n'okpuru ji ya. Mgbe agha nke White Mountain gasịrị, ọ bụ nnukwu ihe ọgbaghara nye ndị na-abụghị ndị Katọlik na ndị a ma ama maka iwulite ụwa, nke Ferdinand nke Abụọ nyere. 15. Onweghi ohere - ma ọ bụ ịkpọ isi ala nye Chọọchị Roman Katọlik ma ọ bụ ịhapụ obodo ahụ. N'ala Jilemnice, nke Křížlice nwe, n'ụtụtụ a enweghị ihe mgbaru ọsọ ahụ. Onye amara aha ya na onye nwere ala Václav Záruba nke Hustiřany chọrọ ndị na-abụghị ndị Katọlik, ọ bụkwa onye nnọchi bishọp ikpeazụ nke ofdị n'otu okpukpe, Jan Ámos Komenský.
Mgbe ọ nwụsịrị, a naara ngwongwo ya na ngwongwo nke Albrecht nke Wallenstein, onye bụ onye ọchịchị Frydlant mechara. Maka Albrecht nke Wallenstein, ọdịmma akụ na ụba dị mkpa karịa mkpa metụtara okpukpe, yabụ na ndị isi na-adịghị akwụ ụgwọ na-agaghị ata ụta na ókèala ya. Křížlice bụ obodo nta, akụkụ nke obodo Jestřabí na Giant Mountains…
Obodo Vítkovice, bụkwa Vítkovice v Krkonoších (German: Witkowitz), dị na mpaghara Semily, na mpaghara Liberec. Ọ dị n'ugwu ndị gbara mmiri na ndagwurugwu nke osimiri Jezerka. 386 bi ebe a.
Ebe e dere ede banyere obodo bụ site na 1606. Na ọkara nke narị afọ nke iri na asaa, otu iko nke ndị ezinụlọ Preissler nke ndị metallurgists rụrụ ọrụ ebe a.
N'afọ 1938-1945, ihe ka ọtụtụ na-asụ German bụ Vítkovice bụ nke Nazi Germany. Mgbe Agha Secondwa nke Abụọ gasịrị, a chụpụrụ ndị mbụ na-achịkwa ebe a na ebe a na-agbanwe agbanwe ọnụ ọgụgụ mmadụ kpamkpam. Kemgbe ahụ, a na-ejikarị ọnụ ụlọ ugwu dị n'ógbè ahụ maka nzube ntụrụndụ.
N’abali Eprel 5, 2017, enyere obodo nta ahụ uwe na ọkọlọtọ.
Obodo a nwere otu mpaghara ihe (Vítkovice dị na Ugwu Giran) adịghị ekewa n'ime mpaghara mpaghara. Obodo Vítkovice n’onwe ya dị n’akụkụ ụzọ II / 294 na ndịda ọdịda anyanwụ nke mpaghara ebe cadastral, a na-akpọ akụkụ akụkụ ọdịda anyanwụ ya Horní Vítkovice, ógbè ndị ọzọ (nke ka ukwuu n’otu obodo dị iche iche gbasasịrị) bụ Levínek, Zákoutí, Janova Hora, Mevaldův Vrch, Skelné Hutě,…
Funicular - Lysá hora, ọdụ ụgbọ ala Černý potok
Lysa hora (Kahleberg n'asụsụ German) bụ ugwu kachasị elu na Czech Ridge, n'ugwu Giant. Ogo nke ugwu ahu bu 1344. Igwe na-emeghe bụ naanị n’oge oyi. Enwere ike ịhụ anya na Lysá Hora dị mma yana ihe ndagwurugwu nke ugwu ugwu si Prague site na anya dị 1310km.
Lysa hora dị ihe dị ka kilomita 4 n’ebe ugwu ọwụwa anyanwụ nke Rokytnice nad Jizerou. Ọ bụ ugwu cumulus nwere ọnụ ụlọ dị larịị nke dị n'akụkụ ọdịda anyanwụ n'agbata ọnụ ọnụ ugwu Plešivec na ugwu Kotel n'akụkụ ọwụwa anyanwụ. Elu osisi dị elu, nke edoziri geodetic, bụ nke osisi kpuchie ya nke nwere oge ụfọdụ, ebe enwere oke ahihia nwere ahịhịa na-adịghị ahụkebe. N’ebe ala di elu enwere oke ohia nke edobere anya.
Ebe ọ bụ na enweghi ụzọ ịgagharị dị n'elu ugwu ahụ ma ọ dị na mpaghara XNUMX nke KRNAP, a machibidoro ịbanye na ya. N'okpuru ọnụ ọnụ elu nwere ike iru n'oge oyi site na ụgbọ ala USB, nke onye na-ama ụlọikwuu…
Rieger Trail bụ mkpagharị, akara uhie akara na ndepụta KČT nọmba 0435, nke Czech Tourist Club guzobere ma guzobe ya na 20 Ọktoba 1909 na nke na-eduga na Semily gaa Železný Brod. Thezọ a na-aga n'akụkụ Osimiri Jizera ma ihe na-erughị 5 km ogologo. A kpọrọ okporo ụzọ aha a ka onye ndọrọ ndọrọ ọchịchị a ma ama na nwa amaala Semily, František Ladislav Rieger, onye, ​​gụnyere ihe ndị ọzọ, guzobere na ntọala nke National Party ma mechara bụrụ onye isi nke abụọ ya. "Riegrovka" gafere na ndozi ndagwurugwu Jizera na nso Semily na Bitouchov
Thezọ ahụ zutere nke ukwuu site na mmalite, na 1925, olulu mmiri Stalak nwere mmiri dị mma agwụchachara n'okporo ụzọ ahụ. Edebeghị ụzọ mbụ, n'ụdị i nwere ike ịga ije taa. N’agbata afọ 1922-1926 e wuru Spenlov ebe a na-agba mmiri n ’ebe ọ ka na-arụkwa ọrụ. Ọ bụkwa ụzụ ụzụ. Ọ dị nso na wuru ya na 1929 ụlọ ndị njem nlegharị nke Crhova - nke a na-akpọ ugbu a Hotel Pod Spálovem. Hydroelectric…
Paseky nad Jizerou na EMBA spol. s ro
Nkume ndị kachasị pụta bụ nkume-agba ntụ, isi awọ na agba ọchịchịrị na agba ọchịchịrị na siltstones nke Rudnice mmiri nke akụkụ ala nke Permian Vrchlabi Formation. Ha na-abụkarị ndị na-akpachapụ anya ma nwee ọnọdụ nke clayey ma ọ bụ obere limestones na dolomitic limestones, na-abụkarị ihe dị ọcha. Ihe ndị a bụ ọdụ mmiri ọdọ mmiri na-egbu egbu, na-ekpuchi akụkụ ugwu niile nke Krkonoše Basin na mmalite nke Permian ma gbadaruo ọdịda anyanwụ yana banye na Munich Basin. Mkpochapụ bụ mpaghara ime ihe ebe achọtara flora na fauna bara ụba, na-egosi afọ Permian. Rudnice sara mbara bụ ugwu kachasị kwụsie ike ma kwụrụ ọtọ nke mpaghara niile.
Ebe a na-eme ski Resort Šachty Vysoké nad Jizerou
Ebe egwuregwu Šachty dị na mgbago ugwu Bohemia na mpụga obodo Vysoké nad Jizerou, kilomita 15 site na Semily, 120 km north of the n'isi obodo Prague. Kiachty Šachty inachty n'oge oyi na-enye ndị mmadụ ihe eji egwu elu 3, oge ụmụaka 2, 4 km slopes maka mmadụ niile. Usoro ihe eji egwu mmiri n'oge a maka 90% nke egwu. Maka ndị njem ụzọ na-agafe agafe, enwere ụzọ 35km nke ụzọ gafere nke ala. O doro anya akara akara 1-10km. Edebere maka kpochapụwo na usoro ọhụụ. Roomgbanwe ime ụlọ na akụrụngwa maka ịkwadebe skis.
Foto Boiler Giant Mountains
Thegbọ epeepe ahụ (Kesselkoppe n'asụsụ German) bụ nnukwu ugwu dị na ugwu Czech kachasị elu nke Ugwu Giant. Ọ dị na mpaghara ọdịda anyanwụ ha na mpaghara Semily na Liberec Region, ọnụ ọgụgụ kachasị elu nke. Ọ bụ ugwu nke iri kacha elu na Czech Republic. N'oge gara aga, a na-akpọkwa ya Krkonoše na Kokrháč.
Ọ bụ ugwu, nke dị 5km n’ebe ọwụwa anyanwụ site na ebe a na-eme egwuregwu Rokytnice nad Jizerou. E nwere ebe ndị ọzọ dị mkpa dị gburugburu, dịka Lysá hora (1344 m), Harrach's Nkume (1421 m) ma ọ bụ Vlčí Ridge (1140 m). Ọ bụ obere na nnukwu ụgbọ mmiri gbara ya gburugburu site n'akụkụ ndịda-ọwụwa anyanwụ, nke nnukwu ikuku na-etinyekarị na oge oyi. Dịka ụlọ ọrụ Krkonoše dum, a na-eme mkpọpu mmiri ahụ site na wlọgrị Hercynian ma nwee ọtụtụ ihe mica.
Enwere ike ịnweta ọdọ mmiri ahụ site na Rokytnice nad Jizerou, site na ebe ụgbọ ala USB na-eduga ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ elu nke Lysá hora, site na ebe ahụ ị nwere ike ịga n'ihu na mkpọda nke ụlọ ahụ na-aga n'okporo ụzọ njem uhie. Agbanyeghị, ọnụ ọgụgụ kachasị elu n'onwe ya adịghị, n'ihi na ọ dị na mpaghara mbụ nke Krkonoše…
Egosiputara oria di elu
Gburugburu ụlọ Horní Míseíky, n'agbanyeghị ogige ntụrụndụ mba ahụ. Developmentlọ ọrụ mmepe Prague wuru ụlọ isii buru ibu na Horní Mísečky na kpam kpam wee gbanwe ọdịdị gburugburu na odida obodo maka ọgbọ dị n'ihu. Ngosiputa doro anya nke Ministri gburugburu na enweghi nleda anya doro anya nyere ulo oru mmepe aka na ndi ogba ama iru ulo nke ala Krkonoše National Park, bu nke ndi ulo ojoo ojoo mebiri ugbu a.
Njikwa nke Krkonoše National Park megidere mmejuputa iwu a ma manye onye itinye ego ịgbanwe atụmatụ ya. Radek Drahný, onye na-ekwuchitere ogige ntụrụndụ mba ahụ kwuru, "Anyị na-anwa ịkwụsị ọrụ ahụ niile kemgbe afọ 2008, ma nke a enweghị ike, enwere echiche ndị ọka iwu na ya. Anyị gbara mbọ belata opekempe nke abụọ na nke atọ. A na-arụ ụlọ iri na anọ, "Drahný kwusiri ike.
"Ndị ọchịchị KRNAP jụrụ Minista nke gburugburu maka ikike ...
Memorable linden nke Dolní Rokytnice nad Jizerou
N'ihi ịdịiche ya, osisi a bụ otu n'ime osisi ncheta echekwara na Czech Republic. Ọ bụ osisi lime nke gbara agba nke ukwuu na Dolní Rokytnice nad Jizerou nwere okirikiri nke 540 cm na ihe dị elu nke mita 28.
Peeji nke st. Mark, Dolni Rokytnice "Na Skala"
Kaplička sv. Mark na-elekọta Pavel Zuzánek, onye na-elekọta ya ma nwee mkpịsị ugodi. Ọ bụ nnukwu ebe ofufe na-ụlọ Gothic nke nwere ebe ịchụàjà. Afọ iwu ụlọ 1884, onye isi nchịkwa Ivo Kvapil. Site na uka a, enwere echiche nke Rokytnice nad Jizerou na Lysá hora.
Prachov Rocks foto
Prachovské skály bụ mpaghara okwute okwute, oghere nchekwa na akụkụ nke Bohemian Paradise echekwara Landscape, nke dị ihe dị ka kilomita ise ruo asaa n’ebe ọdịda anyanwụ nke Jičín n'etiti Prachov, Pařezská Lhota, Dolní Lochov na Blaty na Hradec Králové Mpaghara. Nkume oke ugwu ahụ malitere n'oge Mesozoic dịka ụrọ Cretaceous na-emighị emi. Mpaghara echedoro nọ na-elekọta AOPK ČR - ụlọ ọrụ mpaghara na Liberec. Na usoro mbara igwe, Prachov Rocks bụ akụkụ nke Jičínská Hilly Hills, Turnovská Hilly Hills, Vyskeřská Highlands District na Prachovská Hilly Hills, nke bụ akụkụ geomorphological dị iche.